सर्वश्रेष्ठ चिज युरोप प्रस्तुत छ के छ | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सर्वश्रेष्ठ चिज युरोप प्रस्तुत छ के छ
यो युरोप सबै भन्दा राम्रो छ कि धेरै चिरपरिचित वास्तवमा हो गन्तव्य गुणस्तर पनीर लागि. र एक पनीर प्रेमी रूपमा, तपाईं शायद जो सबै भन्दा राम्रो चीज युरोप प्रस्ताव छ छ जान्न चाहन्छु र यो कसरी पाउन.
हामी युरोप गरेको उत्कृष्ट र सबै भन्दा मनाइन्छ पनीरों को सूची मार्फत चलाउन हामीलाई सामेल. हामी विशेष पनीरों लागि प्रसिद्ध छन् जो स्थानहरू प्रकट. हामी पनि कसरी यी गन्तव्यहरू सुविधाजनक र शैली मा पुग्न छलफल रेल बाट तपाईंको युरोपेली पनीर बनाउन यात्रा तपाईं कहिल्यै बिर्सन एक.
स्विट्जरल्याण्ड भन्दा घर छ 450 जो सबै भन्दा राम्रो चीज युरोप हुन् पनीर को किसिमहरु. यसको धनी इतिहास पनीर मा देखि कुनै कसैको आश्चर्य गर्न आउँछ स्विट्जरल्याण्ड यो आफ्नो दूध आउँदा एउटा उत्तिकै प्रभावशाली प्रतिष्ठा छ. स्विट्जरल्याण्ड गरेको शानदार धन्यवाद mountainside, गाई ताजा मा खुरचना, सफा घास. घाँस-खुवाउनुभयो गाई सबै भन्दा राम्रो दूध पनि अधिक flavorful पनीरों बनाउँछ जो उत्पादन.
को र deliciously नम्र एमेंटल सायद सबै भन्दा प्रसिद्ध स्विस पनीरों मध्ये एक छ. तपाईं मा मूल एमेंटल निर्माता पाउनुहुनेछ Emmentaler चिज कारखाना Schaukaeserei. स्विट्जरल्याण्ड जहाँ तपाईं Gruyère बनाउन रमणीय पनीर कारखानों पाउनुहुनेछ पनि छ, ग्रेनाइट, हरियो चिज, बाख्रा गरेको दूध Ricotta, Bregaglia, र भैंसी Mozzarella.
तपाईं धेरै ज्यादा यस्तो जेनेभा रूपमा स्विट्जरल्याण्ड गरेको ठूलो शहर कुनै पनि उत्कृष्ट स्विस पनीरों प्राप्त गर्न सक्छन्, ज्यूरिख, वा बेसल. तपाईंले यी पुग्न सक्दैन रेल द्वारा सुन्दर शहर जस्तै अन्य प्रमुख युरोपेली शहर देखि पेरिस, बर्लिन, वा रोम. साना गाउँमा चर्चित यी असल पनीरों स्रोत रूपमा चिनिने आउन, तपाईं दुई रेल लाग्न सक्छ, एक प्रमुख शहर एक र अर्को को सहर पुग्न.
तपाईं सबै भन्दा राम्रो चीज सोच्न गर्दा युरोप तपाईं स्वतः फ्रान्सेली पनीरों विचार प्रदान गर्न भएको छ, पक्कै पनि मलाईदार BRIE र ठीक Camembert मनमा आउन. तथापि, फ्रान्स पनि यसको धनी Roquefort लागि जानिन्छ, सबैभन्दा प्राचीन पनीरों को सायद एक. यो चीज एक प्राप्त स्वाद भएकाहरूले लागि हो.
फ्रान्स Boursin घर पनि छ, यो भाँडा मा सुन्दर शामिल धेरै शेफ द्वारा प्रेम छ कि एक मलाईदार पनीर. Chèvre अर्को प्रसिद्ध फ्रान्सेली पनीर छ. यो चीज को उमेर मा निर्भर गर्दछ कि एक बनावट संग एक बाख्रा गरेको दूध पनीर छ; वृद्ध यो छ, अधिक acrid र धनी यसको स्थिरता. Tomme डे SAVOIE एक कोमलता रंग-भित्री र खैरो पीसने संग दृढ गाई गरेको दूध पनीर छ.
यी flavourful फ्रान्सेली पनीरों आफ्नो मनपर्ने फ्रान्सेली शहर गएर पत्ता. पेरिस गर्न रेल लिन, लियोन, मार्सेइल, र अन्य शहर प्रमुख युरोपेली शहर को सबै भन्दा देखि फ्रान्स. एक पनीर प्रेमी रूपमा, तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ स्थानीय को पनीरों बनाउन फार्महाउस. यी सजिलै तपाईं रेल द्वारा प्रमुख शहर पुग्यो एकपटक आफ्नो यात्रा जारी गरेर पहुँच भइरहेको हो.
एम्स्टर्डम लाईनबाट ट्रेन बाट
सबै भन्दा राम्रो चीज युरोप – इटाली
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो चीज पाइन्छ इटाली, संसारमा संसारको सबैभन्दा ठूलो चीज उत्पादकहरु को एक. संसारमा सबै भन्दा प्रसिद्ध पनीरों केही इटालियन छन्. कसले Mozzarella सुने छैन, Parmigiano-Reggiano, र Ricotta? इटाली ले असिना अन्य विश्व-प्रसिद्ध पनीरों Gorgonzola छन्, Mascarpone, Provolone, र Pecorino. यी स्थानीय उत्पादन पनीरों उच्चतम गुणस्तर र परम्परागत व्यञ्जनहरु प्रयोग.
इटालियनहरू आफ्नो पनीरों प्रेम धेरै तिनीहरूले छ कि सबै भन्दा राम्रो चीज युरोप चाडहरूमा आफ्नो संस्कृति को भाग हो. सबै भन्दा ठूलो चीज चाडहरूमा एक पिडमन्ट मा Bra चिज महोत्सव छ. सिसीली celebrates "तिहार Ricotta पनीर” वा Ricotta र पनीर तिहार प्रत्येक वर्ष. सेप्टेम्बर मा पहिलो आइतबार टस्क्यानी टाउको र स्थानीय संग Pecorino चिज महोत्सव मनाउन.
रोम गर्न रेल लिन, फ्लोरेन्स, मिलान, नेपल्स, र उत्पादकहरु देखि सीधा सबै भन्दा राम्रो चीज युरोप नमूना अन्य प्रमुख शहर, एक ट्रेन सेव.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cheese-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#पनीर #Cheeze खाद्य यात्रा travelfrance यात्रा यातायात स्विट्जरल्याण्ड